Le nyanga, cwangcisa ukutyelela ugqirha wesetyhini, ingakumbi ukuba ngexesha leeholide udibene nomlingane ongaqhelekanga. Emva koko, izifo zabesetyhini, izifo zesifo sezesondo zingaphantsi kwexesha elingenakwenzekayo kulo.
Unoyolo kwaye unelisekile, intombazana ibuyele kwi-resort kwaye ngamanye amaxesha ayisoze ikhumbule ukuba umdlalo wakhe wokuzonwabisa uqala nje! Enye yeenketho zokuphuhliswa kwesiqendu kukukhulelwa okungenakulungiswa. Esinye isifo se-venereal, ixesha lokuxubusha lezona zininzi kwiiveki ezingama-3-4. Ngokuqinisekileyo, wonke umntu ngaphandle kokungazi uyazi malunga nemiphumo engabonakaliyo, kodwa baqhubeka bebandakanyeka kwi-adventure. Sisiphi isizathu?
Isizathu sokuqala sokuphuhliswa kwezifo zabesetyhini, ukusuleleka ngokocansi, njengabalingani bezocansi, bakholwa yi-gene infidelity - ivuselela i-akkurat ngexesha lokunyuka. Izifundo zaseBrithani uRobin Baker ziqinisekisa: abafazi bahlala begijimela echibini lokukhanga, batshintsha abayeni babo, kuphakathi komjikelezo wesini. Ukwandiswa ngokwesini kweso sihlandlo kungekhona ngengozi: ngexesha lokuvuthwa ukukwazi ukukhulelwa kuphezulu. Kuvela, imvelo ngokwayo iyasiqhubela kwisondo ngenxa yokuzala.
Esinye isizathu - ukuthuka umyeni wakhe, ukungabikho kwakhe, ukunyaniseka, ubuvila. Phantse ngamnye wethu unesizathu sakhe sokukhubeka. Kuba bethu basekhaya, kuya kuba kunengqiqo ukubeka le nto kuqala. Ukuba ibhinqa livuya emtshatweni, akakhange abhekane namanye amadoda. Kodwa xa ulwalamano luqhekeka kwiindawo zokuhlala, uyaziphupha ngokugqithiseleyo amaphupha okuziphindezela kumyeni wakhe, ukumyala ngeempondo. Iingcali zengqondo zibiza eli lizwe ukulungelelanisa kwengqondo ukunyanzela.
Incwadi emfutshane incinci iyakususa okwesikhashana intombazana evela kwiinkomfa, inika ithemba lokuba uyashukumisa, inqwenelekayo kwaye ifaneleka. Iimvanoveli ezidibanisa kakhulu zengqondo ziboshwe kwiindawo zokungcebeleka - oku kuququzelelwe yendalo kunye nethuba lokunqanyulwa ngokupheleleyo kwiingxaki ...
Nangona kunjalo, unxibelelwano oluqhelekileyo luhlala ludlala umdlalo we-roulette. Kweminye, iphelela ngeminkumbulo emnandi. Abanye, baziva benetyala phambi komyeni, bamxelele yonke into, kwaye akukho mboniso ontle. Owesithathu "uluthando oluthandayo olunomdla" luhamba ngokukhawuleza lube luhamba ngokugqithisa ngogqirha.
Izifo ezithathelwana ngocansi (STDs) ziziphumo zesini esingakhuselekanga. Nangona ikhondom ayinakunceda rhoqo: ii-STD ezininzi zihanjiswa ngomlomo, kwaye ukuba ukusuleleka nge-trichomoniasis akunakwenzeka, ngezinye i-gonorrhea idluliselwa.
Ukuba iqabane lingenayo imiqondiso yezifo ezithathelwana ngesondo (ukugqithisa kwizitho zangasese, ukukhutshwa kolukhuni), oku akuthethi ukuba unempilo - kumadoda, amaninzi ama-STD ayenazo.
Enye intsomi eyaziwayo: ukuba umntu osapho usisiqinisekiso sokuhlambuluka kwakhe. Akunandaba nokuba kunjalo! I-Syphilis kumfazi oyithathayo, akunakwenzeka, kodwa i-chlamydia, ureaplasmosis, trichomoniasis ifumaneka kubantu abaninzi "abaqhelekileyo". Ngoko, xelela ngamandla kumlingane ongaqhelekanga ukuba asebenzise "ibhande le-rabber" - yena akakwazi ukukhathazeka ngokhuseleko lwakho. Ewe, ikhondom ayikhuseli i-100%, kodwa akukho nto ihlelwe ngayo nangona kunjalo ...
Ukugcoba ngeesepha okanye ukulingana kunye ne-antiseptic akusinakusindisa kuzo zonke iintsholongwane kunye neentsholongwane. Ngaphezu koko, oogqirha bakholelwa ukuba i-douching, ngokuchasene nayo, inokuvelisa ii-pathogens kwiindawo eziphezulu zamalungu omzimba wesini.
Umqondiso wabantu, njengokungathi ukutshiza emva kokulala ngokwesondo kukukhusela kwizifo, kunyanisekileyo kuphela: ingozi yokusuleleka isifo iyancitshiswa, kodwa ingabalulekanga.
Khumbula, ii-STD ezingaphendulwanga lixesha lebhokhwe. I-ureaplasmosis iholele kwizifo ezivuthayo zesisu kunye nezixhobo, isifo segciwane lesifo se-papilloma - ekuqaleni komhlaza wesibeleko. I-Trichomoniasis ne-gardnerellez bandise ingozi yokuzalwa ngaphambi kokuzalwa. I-gonorrhea kunye ne-chlamydia zinika iingxaki ezinjengezifo ezivuthayo zezibeleko kunye nezixhobo, ezivame ukudala ukungabikho. Ngoko ungalibali ukutyelela ugqirha.
6 izizathu zokukhathazeka
Xhumana nodokotela wakho xa uzithola ufumana iimpawu ezinjalo:
ukutshisa nokutshaya kwindawo yesini;
- ukungcola okungaqhelekanga kwi-vagina (ininzi, enevumba elimnandi kunye nombala ongaqhelekanga);
Ubuhlungu xa uchama;
- ukuphuma kwegazi ngaphakathi;
intlungu kwisisu esezantsi;
- iimvakalelo ezingathandekiyo kwizonxibelelwano zesondo.
Hayi njalo loo mpawu ibonisa i-STD, kukho ezinye izizathu ezinokwenzeka, kodwa isigqibo esichaziweyo siya kwenziwa kuphela ngugqirha.
Inkomfa yokuzilolonga kwabasetyhini abakhulelweyo
Squash kunye nokuzaliswa kwelayisi
Inyama eneinanayi, ibhaka ehovini, iresiphi kunye nesithombe
Imigaqo yokusetyenziswa kweefom
I-horoscope efanelekileyo kwiveki kaDisemba 25-31, 2017
Isicelo ekuphuhliseni izakhono ezifanelekileyo zezithuthi
I-Biography ye-Queen Jane Seymour
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo ye palmarosa